China n'ihu belt draya factory na-emepụta | Opps Group
Nke a na ngwá bụ a belt ụdị multilayer laa azu draya. The isi akụkụ na-mere nke elu mma carbon ígwè. The igwe anaghị agba ígwè ntupu belt ka nke SUS304, Ọ na-agba were were, mfe ịnọgide na-enwe na nwere ogologo ọrụ ndụ. The dum igwe na-agba ọsọ ọsọ na ihicha okpomọkụ nwere ike ịtọ gị mkpa. Ọ nwere nnukwu ogo akpaaka, azọpụta oru na rụọ mmepụta arụmọrụ. Draya na okpomọkụ na iru mmiri nwere ike gbanwere dị ka kpọmkwem ọnọdụ.
Low okpomọkụ belt draya ikike 1t / h (akọrọ isi / continous)
Continous echebe draya otu ton / h (continous)
Overal Dimension nke draya (LxWxH) (mm) 35660x9800x4000
Main Ihicha Isi (mm) 28170x4380x3150
5 oyi akwa + 1 oyi akwa n'ihi na ájá akpaka ihicha usoro
obosara dị 2760mm
Spreadth thicknss nke ihe onwunwe (mm) 100mm-150mm
Ihicha oge mgbanwe 0.6-4 h
ike 1T / H (akọrọ isi na continous)
Mmepụta maka mgbasa ofufe 148kw
Electric moto maka ebu 6kw
Ike nke Natural Gas Oriri 650m3 / h
Temperataure mgbanwe Ihere - 120 ℃
Arụmọrụ nke ihicha 97%
Igwe eletriki 460V / 60HZ / Mankeumman
The igwe nwere ike iji eletric, gas, LPG, Kol, Biological ahụ, dizel na ndị ọzọ ume kpo oku. The arụ ọrụ ụkpụrụ bụ na ikuku na-ewe iwe site okpomọkụ isi iyi na-ekpo ọkụ ikuku stovu fụọ site mgbasa Fans n'ime n'ime ihicha kabinet ahu nke mere na mmiri nke ngwaahịa na-Takọọ n'okpuru okpomọkụ. Takọọ n'okpuru usoro a, na site ooh ikuku atara n'èzí nke ngwaọrụ na iyuzucha anwụrụ. The igwe nwere ike nọgidere na-eri nri na-eme ka ihe na-agba ọsọ were were. N'oge ihe erute usoro, ọdịiche na-ekekpepde site intermittent ntupu belt ghọta ntụgharị nke ihe onwunwe na-apụghị iru homogeneity nke kpụ ọkụ n'ọnụ ikuku na niile na-ebupụta. Ọ nwere ike jikọọ na ndị ọzọ na ngwá iji nweta-aga n'ihu ime. (Ndị na-esonụ bụ nkọwa nke okpomọkụ mgbapụta belt draya)
Low okpomọkụ Hemp doo echebe draya (1300kgs / Ọrụ Nchịkwa Mmadụ)
Remarks: Ka n'elu image na-egosi: ihicha usoro (ihere ikuku) nke elu mmiri na-transfered site circulationg ofufe n'ime ọkụ ikuku mgbapụta (evaporator), n'oge usoro a, na temparature nke ihere ikuku lowed na mmiri na-ama esịn ala dị ka jupụta ikuku, mgbe ikuku (ihicha usoro) nke kasị ala mmiri na okpomọkụ na-transfered na condenser (ọkụ ikuku mgbapụta) na ikpo elu ikuku. Mgbe nke a, na ikuku (ihicha usoro) nke elu okpomọkụ na ala mmiri na-blowed n'ime akụrụngwa nkụ akụrụngwa ọma.
1.Hot ikuku stovu kpo oku ume nwere ike ịbụ eke gas, biomass pellet, gasị gas, LP.
Gas burner Brand: RIELLO
2.Mesh belt draya nwere onwe ha mgbasa nke na-ekpo ikuku. Nke egbughị gas atara site a pụrụ iche dehumidifying ofufe. Iyuzucha gas na-achịkwa a nduzi valvụ. Na-ekpo ọkụ gas ka ihe elu ma ọ bụ ala na ntupu belt site kpo oku nkụ biomass na-ewepụ ndị mmiri. The ntupu belt Nkea nwayọọ nwayọọ, na-arụ ọrụ na-agba nwere ike gbanwere kpamkpam dị ka ihe onwunwe okpomọkụ na mịrị amị ngwaahịa continously adaghị erite. Elu na ala okirikiri nwere ike flexibly ahazi dị ka onye ọrụ mkpa, na ọnụ ọgụgụ nke nkeji nwere ike họrọ dị ka mkpa. The ego nke ikuku, kpo oku okpomọkụ, ihe onwunwe obi oge, na kpo oku ọnụego nwere ike gbanwere nweta ihicha mmetụta.
3. N'ihi na ala okpomọkụ nke ihe onwunwe, bụ ngwá ọrụ na-kpam kpam na-emechi, na-ahapụ ndị oghere dị mkpa maka nhapu, otú ahụ mmetụta dehumidifying dị mma.
4. The pụrụ iche ikuku oriri ngwaọrụ na-eme ka nkesa na-ekpo ọkụ ikuku ọzọ edo na ana achi achi anọgidesi nke ngwaahịa mma.
(Esonụ bụ ngosipụta nke Hot ikuku ekesa direction)
5. Heating usoro, okpomọkụ na-achịkwa muti-ọkwá imewe na elu ikuku mgbasa ofufe nwere ike ime ka esịtidem okpomọkụ n'ụzọ zuru ezu chụgara n'akụkụ ọ bụla nke ime. Jide n'aka na e nweghị nwụrụ anwụ na nsọtụ. Edo okpomọkụ, ezigbo ikuku ihicha na ihicha ngwaahịa.
a. Circulation Fan: The mgbasa ofufe nwere ike ịfụ na-ekpo ọkụ ikuku N'ịbụ na-ekpo ọkụ afụnwu ọkụ n'ime draya ụlọ.
b. Air olu njikwa, mgbe ikuku okpomọkụ na-ekpo ọkụ gbawara stovu dị elu, uru a na-ekwesị meghere, nke nwere ike replensish ọhụrụ ikuku na mezie okpomọkụ n'ime draya (naanị Goodbye-ewe iwe draya mkpa)
c. Dehumidifier ofufe: ya nwere ike na-ewepụta dee mmiri ikuku.
d. Mmiri akara valvụ: mgbe ikuku okpomọkụ adahade, valvụ nwere ike abawanye a obere, o nwere ike mee ngwangwa mwepụ nke mmiri.
Continous Low okpomọkụ Hemp doo echebe draya
Previous: Large n'ọtụtụ Hay tub grinder
Next: Pellet Mill “Ogologo afọ atọ nke ikike nnabata nke Gear”
Na-aga n'ihu akpịrị ịkpọ nkụ Hemp ntupu-echebe Mmadụ draya
Na-aga n'ihu ntupu-echebe Mmadụ draya
Na-aga n'ihu ntupu-echebe Mmadụ Hot Air Hemp draya
Granulator , Plastic Granulator , Msw mmako , Tree Shredder , Rdf Mmanụ , ala Mill ,